ဘုံတလာ ​ရေတံခွန်​တွင်​ လူငယ်​ တစ်​ဦးပြုတ်​ကျ​ ပျောက်​ဆုံး - သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ဘုံတလာ ​ရေတံခွန်​တွင်​ လူငယ်​ တစ်​ဦးပြုတ်​ကျ​ ပျောက်​ဆုံး
ချင်းပြည်နယ်၊ မတူပီမြို့ ၊ ငလားရပ်​ကွက်​ အဖ ဦးဆွီပင်း (အမက ၃၀၄ ​ကျောင်း အ​ထွေ​ထွေလုပ်​သား ငြိမ်း) ၏ သား ဖြစ်​သူ ​မောင်​ဟိန်းတွီထန်​၊ အသက်​ ၁၇ နှစ်​ သည်​ ၁၈. ၁၁. ၂၀၁၇ ရက်​​နေ့ တွင်​ သူငယ်​ချင်း ​​ ၃ ယောက်​နှင့်​အတူ ဘုံတလာ ​ရေတံခွန်​သို့ သွားကြရာ ​နေ့လယ်​ ၁ နာရီခန့်​ အချိန်​တွင်​ ဘုံတလာ ​​ရေ တံခွန်​ ​​အောက်​ဖက်​ သို့ မ​ ​တော်တဆြ​ပုတ်​ကျ ​ကြောင်းသိရှိရသည်။
ယခုချိန်​ အထိအ​လောင်း​မ​တွေ့ ရှိ​သေးဟုသိရပြီး၊ မနက်​ဖြန်​ ၁၉. ၁၁. ၂၀၁၇ တနဂ်​နွေ ​နေ့ တွင်​ ဆက်​လက်​ ရှာ​ဖွေကြမည်​ ဟု သိရှိရ ပါသည်​။ ဘုံတလာ ​ရေတံခွန်​ တွင်​ ယခုကဲ့သို့ဖြစ်ပွားခြင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။